Guubie: $ 59 Kwa Afọ Email Marketing Platform | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 26, 2013 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Guubie amalitela na beta ma nwee ike jupụta ụwa azụmaahịa email na ego efu nke $ 59 kwa afọ, na-adigide na Email Mandrill nke API. Obi dị m ụtọ ịhụ ụfọdụ ụlọ ọrụ dị ọnụ ala na-abanye n'ọgba mgbe a bịara n'ịre ahịa email. Na blog a, dịka ọmụmaatụ, anyị na-akwụ ụgwọ okpukpu abụọ maka ọrụ email anyị karịa nke anyị nke mbụ.
The Guubie Email Marketing Platform gụnyere:
Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Email - Mepụta mkpọsa ahịa email nke anapụtara ndị ọrụ gị n'ezie. Mee ka ndị mmadụ gụọ ọdịnaya gị ma tinye aka na email na netwọkụ mmekọrịta. Ziga ozi ịntanetị na-adọrọ mmasị ma na-ele anya na ndebiri email na-anabata.
Nnukwu ikike - Jikọọ Guubie na ọrụ nnyefe ozi ị họọrọ, dị ka Mandrill, MailJet, Amazon SES ma ọ bụ SMTP ọ bụla ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na iji Mandrill, ị nwere ike izipu ihe ruru 12,000 email n'efu kwa ọnwa.
Akụkọ di elu na stats - Jiri ha nchịkọta akụkọ ma jikọta ha na nchịkọta Google maka mkpọsa ọ bụla iji nye gị ozi niile dị mkpa ịchọrọ.
ROI ka mma na ule A / B - Mepụta ule A / B na-akparaghị ókè iji nyere gị aka ịchọta ozi kachasị dị irè iji nyefee ndị ọrụ gị.
Nchọgharị & Mac OSX / Windows App Site n'iji ọkọlọtọ ihe nchọgharị dịka Firefox, Safari ma ọ bụ Google Chrome, ị nwere ike ịnweta Guubie na atụmatụ ya niile, n'agbanyeghị ebe ị nọ n'ụwa. Ọ bụrụ n'ịchọrọ nnweta mkpanaka, ịnwekwara ike ibudata ngwa Guubie maka Mac OSX ma ọ bụ Windows.
Ihe na-akpali akpali sitere na omume - ị nwere ike ịmepụta ihe na-akpali iji zigara ndị debanyere aha gị ụbọchị ọmụmụ obi ụtọ ma ọ bụ ọbụlagodi email nnabata nke abụọ ụbọchị abụọ onye ọrụ mepụtara akaụntụ. Jikwaa ọrụ ahịa gị.
API maka ndi mmepe na mbido - Guubie nwere ike XML API, nke pụtara na ndị mmepe nwere ike iwebata nyiwe na ọrụ ha na akaụntụ Guubie ha.
na Guubie, ị na-akwụ ụgwọ otu, ụgwọ ego kwa afọ dị ala 59 $ XNUMX!
Tags: amazon sesemailguubieala na-eriiwu
Sep 26, 2013 na 4:19 PM
Dolls 59 kwa afọ dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma bụ ohi. Toga ileba anya na nke a karie ihe na-atọ ụtọ.